ဆီးရီးယား အိုလံပစ် ကော်မတီက "အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှု" ကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် တရုတ်နှင့် တညီတညွတ်တည်းရှိကြောင်း ကြေညာ - Xinhua News Agency
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒမားစကပ်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဒမတ်စကပ်စ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံက လာမည့်ပေကျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် စဉ်းစားနေသည်ဟူသော သတင်းများအား တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် ဆီးရီးယား အိုလံပစ် ကော်မတီ (SOC) က “အမေရိကန် ခြိမ်းခြောက်သော လှုပ်ရှားမှု” အား ဆန့်ကျင်သည့် အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တညီတညွတ်တည်းရှိကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းကော်မတီက အိုလံပစ်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါ အခြေခံမူများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ အထူးသဖြင့် အားကစားကို နိုင်ငံရေးရန်ပွဲများမှ ရှောင်ရှားသည့် “နိုင်ငံရေးဘက်မလိုက်မှု” နိယာမကို လိုက်နာရန်၊ “အနာဂတ်ကို အတူတကွမျှဝေပါ’’ ဟူသော အားကစားပွဲများ၏ တရားဝင်ဆောင်ပုဒ်ကို လေးစားရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ဆီးရီးယားအိုလံပစ်ကော်မတီသည် နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီအား သံတမန်ရေးအရ အမည်ခံသပိတ်မှောက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ရန်နှင့် အိုလံပစ်ပဋိညာဉ်ကို လေးစားလိုက်နာရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Syrian Olympic Committee announces solidarity with China against “U.S. blackmail”
DAMASCUS, Dec.2(Xinhua) — The Syrian Olympic Committee (SOC) announced Thursday its solidarity with China against what it described as the “U.S. blackmail campaign” reflected by reports about the U.S. mulling over boycotting the upcoming Beijing Winter Olympics.
The committee stressed the necessity of adhering to the basic principles and guidelines in the Olympic Charter, in particular, the principle of “political neutrality”, which is basically keeping sports away from political quarrels and respecting the games’ official motto: “Together forashared future”.
Meanwhile, the committee called on the International Olympic Committee to takeaclear stance against the so-called diplomatic boycott and respect the Olympic Charter. Enditem